किन पर्‍याे हिलो सहितको पानी ? यस्तो छ रहस्य «
किन पर्‍याे हिलो सहितको पानी ? यस्तो छ रहस्य
Published : 16 June, 2018 12:24 pm
काठमाडौं – पार्किङ गरेर राखेको मोटरसाइकल वा गाडीमा आज बिहानै हिलो देख्नुभयो ? हिजाे राख्दा राम्रै भएको गाडी वा मोटरसाइकलमा हिलो कहाँबाट आयो भनेर अचम्ममा पर्नुभयो ? भूइँमा भएको धुलो पो उछिट्टिएर हिलो भयो कि भन्ने सोच्नुभयो कि ? तपाईँको गाडी वा मोटरसाइकलमा भूइँको हिलो लागेको होइन । शुक्रबार राति हिलोसहितकै वर्षा भएकाले त्यसो भएको हो ।
तस्बिरहरु – सुवास कार्की र अर्जुन पाेख्रेलकाे ट्विटरबाट